Etu ị ga - esi melite ahụmịhe ndị ahịa e-Azụmaahịa | Martech Zone
Friday, May 10, 2019 Wednesday, October 14, 2020 Smith Nwachukwu
Ndị ahịa bụ ntọala nke azụmaahịa ọ bụla. Nke a bụ eziokwu maka azụmaahịa niile verticals, ngalaba na-eru nso. Ndị ahịa dị mkpa na ọkwa niile nke usoro azụmaahịa gị. Ebumnuche azụmahịa, atụmatụ, na mgbasa ozi ahịa nke ụdị ndị a ma ama na-achọ ihe na mmasị ndị ahịa ha na ndị na-ege ntị.
Ndị ahịa na eCommerce Environment
N'oge a site na digitization, teknụzụ ekwentị, na asọmpi dị egwu, ị nweghị ike ileghara mkpa ndị ahịa anya. Ihe karịrị 5 nke ndị asọmpi gị na-enye ngwaahịa na ọrụ dịka nke gị maka ndị ahịa ahụ n'oge ọ bụla. Ngwaahịa ị na-enye kwesịrị ịbụ ihe pụrụ iche na mmasị nke ndị ọrụ gị, iji zere ịhapụ ohere ahịa.
Isi ihe na-eme ebe a bụ ahụmịhe nke ndị ahịa gị na ngwaahịa na ọrụ ndị ahịa gị. Ahụmahụ ka mma, ohere ka ị nwere maka ire ahịa.
70% nke ịzụ ahụmahụ dabere na otu ndị ahịa si eche na a na-emeso ha.
Ọhụụ, Njikọ Ndị Ahịa: 10 Stats na Eziokwu iji meziwanye atụmatụ gị
Businesseslọ ọrụ ọhụụ nwere nkwenye siri ike na site na ịnye ahụmịhe ndị ahịa ka mma, ha ga-enwe ike karịa asọmpi ha ma gosipụta ntụkwasị obi na ndị ahịa na; mechaa nweta ọnụ ahịa ndị ahịa.
Ihe omuma, eCommerce bu a mma nye ndị ahịa. Zụ ahịa n'ịntanetị na-ahọrọ ha n'ihi na ọ dị mma, ọnụ, ma jupụta nhọrọ. Mmepe na nchekwa nke nchekwa data na-enye ohere maka ụzọ nkwụnye ụgwọ nchekwa, echekwara, na-egbochi ohere nke aghụghọ n'ịntanetị metụtara ịzụ ahịa n'ịntanetị. Nke a emeela ka ịrị elu ugwu na ahịa eCommerce na nweta ego.
eCommerce sales nwere ike kụrụ akara $ trillion $ 4.3 site na njedebe nke 2021.
Zụọ - Akwụkwọ Ecommerce zuru ụwa ọnụ
Iji ruo ebe ahụ, eCommerce ga-eke eriri ha ma setịpụ na njem nke ndozi - inye a ahụmịhe kachasị elu nke ndị ahịa. Ahụmịhe ndị ahịa gị ga-enwerịrị ogo afọ ojuju ndị ahịa iji gbakwunye na uto ego gị.
80% nke ndị ọrụ agaghị azụ ahịa na ụlọ ọrụ n'ihi ahụmịhe ndị ahịa na-adịghị mma.
Ee, Eziokwu ahụ siri ike banyere ego akwụ ụgwọ (na otu ndi ahia gi puru isi zoputa gi)
Isiokwu a na-ekwupụta ụfọdụ usoro kachasị mma nke na-enyere aka melite ahụmịhe nke ndị ahịa gị na azụmahịa eCommerce gị.
Zụlite Ahụmịhe Ndị Enyi
Site na ebe nrụọrụ weebụ / ngwa obibi na ibe peeji na site na ụgbọ ala iji lelee ibe, ahụmịhe onye ọrụ na weebụsaịtị gị kwesịrị enweghị ntụpọ. Ndị ahịa gị kwesịrị inwe ike ịme ihe ọ bụla ha chọrọ ime.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ha na-anwa ịmefu ụgbọ ha, usoro na igodo ụzọ kwesịrị ka a hazie ma kọwaa ya nke ọma ka ha ghara ịhụ ya dị ka ihe mgbagwoju anya iji weebụsaịtị gị. Kwesịrị ịhazi ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ ngwa gị site na omume enyi ndị ahịa. Ọ kwesịrị ịdị mfe maka ndị ọrụ weebụ gị, ọ bụghị naanị maka gị.
Ekwesịrị inwe bọtịnụ ọchụchọ iji nyere ndị ahịa aka ịchọta ngwaahịa ha na-achọ. Otu, aha peeji, isiokwu ngwaahịa, mkpado, ihe onyonyo, na nkọwa ndị ọzọ - ihe niile kwesiri igodo ya maka mma nke ndị ọrụ. Chee echiche maka itinye n'ọrụ Mgbatị ọchụchọ eCommerce iji mee ka ngwa ngwa na mfe ọchụchọ na weebụsaịtị gị.
Nye Payzọ Seckwụ Secgwọ Maka urenọ ná Ntụkwasị Obi
Zọ ịkwụ ụgwọ na ụlọ ahịa eCommerce gị kwesịrị inwe nchekwa, nchekwa, na enweghị nsogbu. Mgbe ị na-azụ ahịa n'ịntanetị, ndị ahịa chọrọ ịma nke onwe ha na data ego ha echedoro.
Tinye ọtụtụ dị ka ụzọ nkwụnye ụgwọ na ụlọ ahịa gị dị ka o kwere mee. Ebe E Si Nweta / Debit Kaadị ịkwụ ụgwọ, Nyefe Bank, Ego na nzipu (COD), PayPal, na e-Wallets bụ usoro ndị ama ama akwụ ụgwọ ugbu a. Kwesịrị ijide n'aka na ọnụ ụzọ gị na-enye ndị ahịa gị aka ịkwụ ụgwọ site na nke ọ bụla n'ime nhọrọ ịkwụ ụgwọ a.
Nke kachasị mkpa, ị ga-emesi ndị ọbịa na ndị na-azụ ahịa obi ike na nhọrọ ịkwụ ụgwọ gị niile dị mma. Tinye ego na inweta ọtụtụ asambodo nchekwa maka nke a ma tinye akara ndị ahụ na weebụsaịtị / ngwa gị dị ka ndị na-egosi ntụkwasị obi iji mesie ndị ahịa gị obi ike na data ha dịịrị gị nchekwa.
Tinye ego na ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ na-abịa site na usoro nchebe dị iche iche. Izo ya ezo nke data nyere site na ndị ahịa ga-ahụ na azụmahịa ha dị mma. Iji ọnụahịa ịkwụ ụgwọ na-eme ka ndị ahịa gị na azụmaahịa gị sie ike, ma na-ebelata ike na ugboro ole ị na-eyi egwu iyi egwu n'ịntanetị.
Mepụta Usoro Ọpụpụ Na-enweghị Ahịrị
Ọtụtụ mgbe, ihe kpatara otu ụgbọ ibu agbapụrụ bụ ndenye ọpụpụ mgbagwoju anya usoro. Usoro ndenye ọpụpụ na weebụ gị ma ọ bụ ngwa gị kwesịrị ịdị mkpụmkpụ, dị mfe ma dịkwa ọsọ ọsọ. Ọzọkwa, onye ọrụ kwesịrị ịhụ ụgbọ ahịa ya na ibe ọ bụla ka ọ mara ụzọ iji mezue iwu ahụ.
Ecommerce ụlọ ọrụ na-efunahụ imerime dollar kwa afọ n'ihi na gbahapụrụ cart ma ọ bụ kagbuo ịkwụ ụgwọ n'oge ego. Nwere ike idokwa akpaaka iji chọpụta ọnọdụ dị n'azụ ụgbọ ala tufuru iji melite ntụpọ dị adị na usoro ndenye ọpụpụ gị.
N'oge ndenye ọpụpụ, onye ahịa ga-enwerịrị ike ịhụ uru ụgbọ ya na ụgwọ mbupu dị. Peeji ahụ kwesiri igosi ozi gbasara onyinye na ego nkwado ego maka onye ọrụ.
Ndị ahịa na-echekarị maka ịnyefe iwu ha. Ha na-akpọ iji chọpụta ọnọdụ nke mbupu ha.
Depmepụta ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri dị elu ga-enyere azụmahịa gị eCommerce aka ijikọ na ọtụtụ ndị na-ebu ya ma nye gị ohere ịmepụta iwu mbugharị na-agbanwe agbanwe - dịka iwu dị iche iche, ebe ndị ahịa, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị mkpa - site na otu dashboard.
Ọ bụrụ na azụmahịa gị na-ewepụta ma ọ bụ isi mmalite si mba ọzọ, mgbe ahụ, ọ dị mkpa maka mbupu mbupu gị iji nwee mbubata mbupu mbubata / mbupụ. Ihe a niile na - enyere gị aka ịmepụta ahụmịhe kachasị mma maka ndị ọrụ gị ma a bịa mbupu ma nyefee nnyefe.
N'ikpeazụ, ụlọ ahịa eCommerce kwesịrị ịgba mbọ hụ na ọ nweghị oge ọ ga - ewepu oge ọ bụla ma ghara ịda mbà n'oge usoro ndenye ọpụpụ iji zere oge ịhapụ ụgbọ ala ikpeazụ.
Napụta ezigbo ndị ahịa
Iji melite ahụmịhe ndị ahịa, ị ga-elekwasị anya n'inye ọkwa dị elu nke ọrụ ndị ahịa. Nke a ghaghi itinye oru mbu ahia na ahia ahia.
Tọọ otu ndị nwere mmasị ịchọta tebụl nkwado ndị ahịa gị. Mee ka ha nwee nnukwu ihe CRM nyere AI ike - ihe ga-enwerịrị ohere maka azụmaahịa eCommerce nke oge a - ka ha wee nwee ike ijikwa ajụjụ na nsogbu ndị ahịa nke ọma.
Cheedị echiche ụbọchị ọrụ na ogologo ndị ahịa na-echere oge ha iji gwa ndị ọrụ nkwado ndị ahịa gị!
Inwe nkata nke AI na-echekwa oge ndị ọrụ gị, na mgbakwunye, na-enye ha ohere ilekwasị anya na isi ọrụ ndị ọzọ nke usoro nkwado ndị ahịa gị. Ndị nkata nwere ike ijikwa ọtụtụ oku / mkparịta ụka n'otu oge ma dozie nsogbu dị ọsọ dịka nkwenye iwu, ịkagbu, nnọchi, nkwụghachi, nkọwa mbupu, wdg.
Leverage Search & Social Media Optimization / Azụmaahịa
Site n ’ụzọ dị mma nke njikarịcha njin ọchụchọ na ire ahịa, ị nwere ike inyere ndị na-ege gị ntị aka ịchọta ihe ha na-achọ na igwe ọchụchọ, dị ka Google na Bing. Ọ bụrụ na nkwado eCommerce gị abụghị SEO-njikere, ịnwere ike iji ezigbo ndọtị eCommerce SEO mee ihe ma mejuputa usoro SEO nwalere iji gosipụta na nsonaazụ ọchụchọ kachasị elu na njikwa igwe na-eduga.
Azụmahịa gị eCommerce nwere ike iji usoro mgbasa ozi ọtụtụ ụzọ:
Iji Kwalite ngwaahịa, ọrụ gị, ọdịbendị ụlọ ọrụ, na onyinye gị;
Iji jikọọ na ndị na-ege gị ntị na ndị ahịa;
Iji ege ndị ahịa gị na-enweghị afọ ojuju na idozi nsogbu ha na ọnụ ụzọ ọha; na
Iji ịkpọsa gị ika (s).
Ikwesiri iji netwọkụ mmekọrịta kacha dị irè maka azụmaahịa gị, chọta ma jikọọ na ndị na-ege gị ntị / ndị ahịa. Maka ọdịmma nke ndị na-azụ gị, ịnwere ike ịgbakwunye peeji nyocha, mee ka ị nwee ike ịza ajụjụ na ịdebe mgbidi maka ndị ahịa, ma mepụta ụlọ ahịa ma ree na netwọkụ mmekọrịta.
E wezụga inye mma, ọnọdụ echekwara na nghọta, ị nwere ike ịnye ndị ọbịa gị na ndị ahịa gị ndụmọdụ ka ha bulie ahụmịhe ahụ. Maka nke a, ị ga-arụ ọrụ na AI na ML ngwaọrụ nwere ike ịmụta site na omume nke ndị ọrụ na andntanetị ma nyere gị aka ịkwado ngwaahịa kwesịrị ekwesị maka onye ahịa ziri ezi. Ọ dị ka ịnye / na-atụ aro ihe onye ọrụ nwere ike na-achọ.
Smith Willas bụ onye edemede na-enweghị akwụkwọ, blogger, na onye nta akụkọ mgbasa ozi dijitalụ. O nwere asambodo njikwa na Supply Chain & Operations Management and Marketing ma na-etu ọnụ etu ọdịnala dị na ntanetị dijitalụ.